Binders Archives | Utah Pride Center
musha » Trans - Agender - Asiri-Bhinari Zviwanikwa » Zvinosunga
Directory Category: Zvinosunga
GC2B Chest Zvinosunga
Yakagadzwa muna 2015, gc2b ikambani inotengesa-inzvimbo iri muMadganis. muvambi we gc2b, CEO, uye mugadziri, Marli Washington, vakaona kuti sarudzo dzoga dzekusunga dzaive dzisina kugadzikana uye dzaisakwana shati dzekumanikidza dzakagadzirirwa cis varume. SeYunivhesiti yeArtiki Industrial Dhizaina akapedza kudzidza, akashandisa ruzivo rwake mukugadzirwa kwezvigadzirwa uye kumashure kwake mumachira kuti ape sarudzo dzinosvikika, dzakasununguka, uye dzakachengeteka dzakasungirwa dzakagadzirwa nevanhu vevanhu. gc2b binders dzaive dzembatya dzekutanga dzakagadzirwa uye dzakapihwa patent yakanangana nekusimbisa pachipfuva.
Yakagadzwa muna 2015, gc2b ikambani inotengesa-inzvimbo iri muMadganis. muvambi we gc2b, CEO, uye mugadziri, Marli Washington, vakaona kuti sarudzo dzoga dzekusunga dzaive dzisina kugadzikana uye dzaisakwana shati dzekumanikidza dzakagadzirirwa cis varume. SeYunivhesiti yeArtiki Industrial Dhizaina akapedza kudzidza, akashandisa ruzivo rwake mukugadzirwa kwezvigadzirwa uye kumashure kwake mumachira kupa sarudzo dzinosvikika, dzakasununguka, uye dzakachengeteka dzakasungirwa dzakagadzirwa nevanhu vevanhu. gc2b binders dzaive dzembatya dzekutanga dzakagadzirwa uye dzakapihwa patent yakanangana nekusimbisa pachipfuva.
Genderbands - Binder Chirongwa
Genderbands inopa mabhaidha emahara kune avo vanoshaya. Unogona kunyorera kuGenderbands binder chirongwa nekudzvanya pane iyi link iripazasi.
Vanotambira mipiro yevatsva kana kushandiswa zvinyoro-nyoro kutsigira chirongwa ichi.
Kana iyo application yakavharwa, imhaka yekuderera stock. Ita shuwa yekutarisa webhusaiti yavo yemamiriro azvino ekuwanikwa.